Qaraarka 4K waa mid ka mid ah ugu danbeeyay oo uu soo bandhigay in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira. Waa in la ogaadaa in user sidoo kale jecel yihiin inay daawadaan filimada online in xal sare. Tutorial waxaa loo qoray si ay u hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira iyo daawashada filimaanta ma aha arin oo dhan.
Waa maxay movie4K.to?
Top 10 kale oo movie4k.to
Daawashada filimada 4K weligii si fudud sida goobta sakhiray sida ay tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo tan gobolka ee website-ka tahay si loo hubiyo in user helo heshiis ugu fiican ee la xiriirta filimada daawashada iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in website ayaa la arkaa in ay tahay sida ugu fiican ee times dhawaan marka ay timaado user madadaalada.
Waxaa goobta geeyo ah oo ku saabsan baahida loo qabo in video laga heli karaa iyada oo wakiil iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan ee jeer oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user videos share in ay yihiin uploaded in website-kan iyo kuwo kale oo ku jira si aad u daawato videos ah oo aan wax arrintan iyo dhibaatada ay awoodaan. Waxa kale oo xusid mudan in diiwaan gelinta website-ka waa mid ikhtiyaari ah iyo mid ka mid ma aha waxay u baahan tahay xisaab arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah habka farshaxanka ee filimada daawashada la raacay.
Sannadkii 2011-guriga wakiilada USA warqad ka Motion Pictures Association of America helay in movie2k.to goobta waa suuqa ugu weyn ee filimada burcadnimo ah oo waa in la xidho laakiin aan ficilka la qaadin arrintan la xiriira sida xarunta uu ku salaysan yahay in Romania. Waxaa sidoo kale in la xuso in moive4K.to waxay ahayd wax yar kadib markii la bilaabay xidhanno lama filaan ah hoos of movies2K.to iyo ka dib falanqayn taxadir waxaa loo waxyooday in goobta server waa British Virgin Islands. Hadda waxa lagu heli karaa luqado Ruushka, Jarmalka iyo Ingiriiska.
Ka dib waa in xal kale movie4k.to iyo inay yihiin kheyraadka bixiyo oo aan la bixin labada hoos ku xusan:
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka goobaha farshaxanka kuwaas oo hubiyo in user helo content oo dhan hal meel oo aan wax arrin oo dhib ku ah. Waxaa kale oo goobta ka oo Dardaarmi user a meelaha kale si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee waayo-aragnimo movie tahay waxaa ku riyaaqay oo aan arin kasta.
Number of filimada: Kuwaas oo isugu jira 100,000 oo 500,000
Price: Free ah kharashka
Sidoo kale waa mid ka mid ah goobaha ay in ay bixiyaan content tayo leh si user oo aan arin kasta. Interface ee goobta ayaa la dhigay mid aad u fudud oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ku isticmaali kartaa filimada ah oo aan wax arrin oo dhib. Goobta ayaa la qiimeeyo sida fiican ee ay mar walba.
Number of filimada : 100,000
Price : Lacag la'aan
Sidoo kale waa mid ka mid ah website-ka bixiya content oo tayo leh user marka loo eego xal. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah filimada tahay ay yihiin kuwo la uploaded in this site sida xalka had iyo jeer waa HD sameeyo.
Number of filimada: Ilaa 20,000
Price : Free laakiin account abuurka waa khasab in la daawado filimada.
4. Ra'iisul magacaabo Tristan
Helitaanka filimada weligii si fudud sida ay wax yihiin Ra'iisul Siligga. Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah websites tahay taas oo la hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee reer natiijooyinka raadinta in la siiyey iyaga u ah. Movie kasta oo kasta waa state of tahay sida ururinta ugu fiican u sugnaaday isticmaala.
Number of filimada: Ilaa 25000
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka goobaha tahay in uu leeyahay interface ugu fudud si loo hubiyo in user helo heshiis wanaagsan ee arrintan la xiriira ee. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu wanaagsan iyo qalabka ugu horumarsan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyey oo aan wax arrin oo dhib ka dhigi.
Number of filimada : Ilaa 2000
Bogga internetka ee bixiya faahfaahinta ugu wanaagsan oo dhan ka kooban oo uu soo uploaded in website-ka. Waa goob taas oo ka dhigaysa hubiyo in user waxaa weli laga badinin arrintan la xiriira iyo filimka waxaa laga helaa oo aan wax arrin oo dhib. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo state of websites tahay in la hubiyo in user helo heshiis ugu fiican oo aan wax arrin oo dhib ka dhigi lahaa.
Number of filimada : Ilaa 10,000
Zone 7. Cool movies
Website-kani waa run ahaantii qabow si aad u daawato iyo in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay ayaa la raacay si uu u daawado filimada ah. Meelaynta ee content sidoo kale waa hab ugu fiican in la hubiyo in user marna ka tagay cidla ah in arrintan la xiriira.
Number of filimada: Ilaa 4000
Kooxda 8. Film
On this site filimada ayaa la diyaarin sida ku sifayn iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay waxaa sidoo kale lagu qeexay in arrintan la xiriira si loo hubiyo in user ka helo natiijo wanaagsan oo ka mid ah kuwa dhisayaa ilaa
Number of filimada : Ilaa 25,000
9. Movie xukun jecel
Waxaa shaki la'aan waa mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-socodka tahay in la raaco ayaa laga yaabaa in la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa ka. Khariidad ee website-ka sidoo kale waa sida in user marnaba ka heli arrin kasta oo helo filim.
Number of filimada : Ilaa 25000
Website-kani wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee natiijada farshaxanka ee la xiriirta dayactir guud ee website-ka. Waa ay fududahay in caleenta iyo in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican laga helo arrintan la xiriira.
Number of filimada: Ilaa 15000
> Resource > Video > Top 10 movie4k si kale oo aad u